ပန်ဒိုရာ: Happy Birthday Gyit Gyit , Nya Lay & Demo!!!!
Happy Birthday Gyit Gyit , Nya Lay & Demo!!!!
ဂျစ်ဂျစ်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဒီပုံလေးနဲ့ပဲ အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်။
လ်ိပ်ပြာကြိုက်တဲ့ ညလေးအတွက်ကတော့ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်နော်။
၁၂ ဇူလိုင်က ၂၃ နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ချစ်ရတဲ့ ဒီမိုကီတိုကြယ်ကြယ် လေးအတွက်လည်း ဆုတောင်း ထပ်မံ ဖြည့်စွက်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီမိုနဲ့ ခင်မင်ခဲ့ကြရတာတော့ နှစ်နဲ့ချီ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဖိုရမ်တစ်ခုက အစပြုလို့ပေါ့။ ခုတော့ ဘလော့ဂ်ထဲအထိ လိုက်လာတာကိုး။ (ဒီမိုရေ လက်ဆောင်ကိုတော့ ဂျီထဲကနေ ပေးပြီးပြီနော်။ ကိတ်မုန့်လည်း စားပြီးပါပြီ။)
ရတာလို လိုတာရ ပြည့်ဝပါစေကြောင်း
မေတ္တာဖြင့် နှုတ်ဆက် ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
Posted by pandora at 12:30 AM
မပန်ရေ.. ခုလို သိပ်ချစ်စရာပုံလေး ဆွဲပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်တယ် ။ ဂျစ်ဘ၀မှာ ပထမဆုံး ပုံဆွဲပေးတာ မပန်ပဲ ။ ဒီတော့ မပန်လည်း ဂျစ်ရဲ့ ပထမဆုံးထဲပါသွားပြီနော်း)
အဲဒီပုံလေးကို မပျောက်မပျက်အောင် သိမ်းထားမယ် ။ မပန်လက်ရာလေးက တကယ်ကောင်းပး)
July 15, 2007 at 8:40 AM
မပန်ရေ ကျေးဇူးပါ။ ဒါတွေကြောင့် မပန်က ချစ်ဖို့ တအားကောင်းနေတာ... နေမှာ... မွ..
July 15, 2007 at 6:44 PM
ဟုတ်တယ်နော်.. ခင်ကြတာလဲတော်တ်ာကြာပေါ့.. အင်း..မပန်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကို သိမ်းထားတယ်.. မပန် ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါလိုတယ်.. ခုလိုထပ်ပြီး wish လုပ်တာ ကျေးဇူး..
Singapore National Day Parade Preview